Xiaomi ရဲ့ အမိုက်စားအလန်းစား $100 တန် mechanical ကီးဘုတ် – DigitalTimes.com.mm
378 Shares 108 Views
Xiaomi ရဲ့ အမိုက်စားအလန်းစား $100 တန် mechanical ကီးဘုတ်
Xiaomi ကတော့ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်လောက်ကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပြီးတော့ နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာအသုံးပြုနေရတဲ့ထုတ်ကုန်ဈေးကွက်မှာ အဓိကဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့သူလည်းဟုတ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ Mi Home Store တွေမှာရောင်းချနေတာတွေကတော့ robot vacuum (ဖုန်စုပ်စက်), smart shoe တွေ ဈေးသက်သာတဲ့ စမတ်မီးသီးတွေ စမတ်ချိန်ခွင်တွေနဲ့ smart luggage တွေတောင်ပါပါသေးတယ်။
ဒါတွေအပြင် နောက်ထပ်အသစ်ထပ်မံဝင်ရောက်လာတာကတော့ ကီးဘုတ်တွေပါ။ ဒီဇိုင်းစတိုင်လ်လေးက မိုက်တာကြောင့် တော်တော်လည်း စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ ကီးဘုတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး နာမည်ကတော့ Yuemi MK01B လို့ခေါ်ပါတယ်။ Xiaomi ရဲ့တခြားကျန်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေလည်း သူလည်းလူကြိုက်များတဲ့ပစ္စည်းလေးပါ။
Mechanical Keyboard တွေက ဘာကွာသွားလဲ?
ဒီနေ့ခေတ်ရောင်းနေတဲ့ကီးဘုတ်အများစုက အောက်က ရာဘာ switch လေးတွေနဲ့ခံထားတာပါ။ ဒါကြောင့် စာလုံးရိုက်ဖို့အတွက် ကီးကိုအောက်ဆုံးထိဖိနှိပ်ပြီးရိုက်မှ စာတစ်လုံးပေါ်ပါမယ်။ mechanical keyboard တွေကျတော့ key cap ရဲ့အောက်လေးမှာတင် physical switch လေးနဲ့တွဲကပ်ထားတဲ့အတွက် အောက်ဆုံးထိဖိနှိပ်စရာမလိုပါဘူး။
စာရိုက်ရတာပိုလည်းမြန်ဆန်သလို တိလည်းတိကျတဲ့အတွက် feedback လည်းကောင်းနေပါတယ်။ switch တွေလည်းအများကြီးရှိတာကြောင့် ကိုယ်ရိုက်နေကျကိုယ်သဘောကျတဲ့ switch မျိုးကိုရှာဝယ်လို့လည်းရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက mechanical keyboard တွေက ပုံမှန်ကီးဘုတ်တွေထက် ပိုရှည်ပါတယ်။
Yuemi MK01B မှာ key 87 ခုရှိပြီး ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ရတာကိုက တရုတ်ထုတ်နဲ့မတူဘဲ Apple ရဲ့ထုတ်ကုန်လို့တောင် ထင်ရလောက်အောင် မိုက်နေပါတယ်။ Cherry MX Red switch တွေနဲ့ ကီးဘုတ်ကို အဖြူရောင်ဗားရှင်းအနေနဲ့ထုတ်လိုက်ပြီး iMac တွေ MacBook တွေနဲ့လည်း သုံးလို့ရပါတယ်။
သိပ်သည်းတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ တည်ဆောက်မှုအရည်အသွေးကောင်းတာအပြင် matte black အရောင်နဲ့ အနီရောင် LED မီးတွေက ဂိမ်းသမားတွေအတွက်စွဲမက်စရာပါ။ key တစ်ခုစီရဲ့ switch တိုင်းရဲ့အပေါ်မှာ အနီရောင် LED မီးပါပြီးတော့ ညာဘက်အောက်ထောင့်မှာပါတဲ့ Fn key ကနေ LED မီးတွေရဲ့အရောင်ကိုညှိလို့ရပါတယ်။
Windows button, Caps Lock နဲ့ Scroll Lock ဆိုတဲ့ Key သုံးခုမှာ အပြာရောင် LED ပါပါပြီးတော့ အဲဒီ key တွေပွင့်နေတဲ့အချိန် enable ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအပြာရောင်မီးပြနေပေးမှာပါ။ အဖြူရောင်ဗားရှင်းမှာတော့ ကီးတွေအကုန်လုံးရဲ့အရောင်က အဖြူရောင်ဖြစ်နေပြီးတော့ ဒီ ကီး၃ခုက အနီရောင် LED ကိုပြပေးထားမှာပါ။
ဘေးဘက်မှာလည်းဘောင်တွေသိပ်မရှိတဲ့အတွက် သယ်ရလည်းလွယ်ကူပါတယ်။ dimension ကတော့ 35.80 × 12.80× 3.16 cm ပါ။ ကျောဘက်ကတော့ အကြမ်းခံနိုင်တဲ့ အလူမီနီယမ်ပြားကိုသုံးထားတာကြောင့် အလေးချိန်က ၉၄၀ ဂရမ်ရှိသွားပါတယ်။ ကျောဘက်မှာ ရာဘာအခံထောက်ကလေးတွေရှိပြီး 4cm လောက်မြင့်ပါတယ်။
ကြိုးနဲ့ကီးဘုတ်ဖြစ်ပြီး ထိပ်ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာ microUSB ကြိုးလေးပါပါတယ်။ ဘာ driver မှမလို ဘာမှ install လုပ်စရာမလိုဘဲ ကြိုးလေးကိုကွန်ပျူတာရဲ့USB ပေါက်မှာတပ်သုံးလိုက်ရင်ရပါပြီ။ ဈေးနှုန်းကတော့ $100 လောက်ဖြစ်လို့ ဈေးသင့်တဲ့ကီးဘုတ်ထဲမှာတော့ မပါပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တည်ဆောက်မှုအရည်အသွေးပိုင်းရော red LED တွေနဲ့ MX Blue switch တွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင်တော့ တော်တော်တန်တဲ့ကီးဘုတ်ထဲမှာပါပါတယ်။
Xiaomi ကတော့ ထုတျကုနျအမြိုးအစားပေါငျး ၂၀၀၀ ကြျောလောကျကိုထုတျလုပျရောငျးခနြပွေီးတော့ နစေ့ဉျလူမှုဘဝမှာအသုံးပွုနရေတဲ့ထုတျကုနျဈေးကှကျမှာ အဓိကဖွနျ့ဖွူးရောငျးခနြတေဲ့သူလညျးဟုတျပါတယျ။ တရုတျနိုငျငံ Mi Home Store တှမှောရောငျးခနြတောတှကေတော့ robot vacuum (ဖုနျစုပျစကျ), smart shoe တှေ ဈေးသကျသာတဲ့ စမတျမီးသီးတှေ စမတျခြိနျခှငျတှနေဲ့ smart luggage တှတေောငျပါပါသေးတယျ။
ဒါတှအေပွငျ နောကျထပျအသဈထပျမံဝငျရောကျလာတာကတော့ ကီးဘုတျတှပေါ။ ဒီဇိုငျးစတိုငျလျလေးက မိုကျတာကွောငျ့ တျောတျောလညျး စိတျဝငျစားကွတဲ့ ကီးဘုတျတဈခုဖွဈပွီး နာမညျကတော့ Yuemi MK01B လို့ချေါပါတယျ။ Xiaomi ရဲ့တခွားကနျြတဲ့ထုတျကုနျတှလေညျး သူလညျးလူကွိုကျမြားတဲ့ပစ်စညျးလေးပါ။
Mechanical Keyboard တှကေ ဘာကှာသှားလဲ?
ဒီနခေ့တျေရောငျးနတေဲ့ကီးဘုတျအမြားစုက အောကျက ရာဘာ switch လေးတှနေဲ့ခံထားတာပါ။ ဒါကွောငျ့ စာလုံးရိုကျဖို့အတှကျ ကီးကိုအောကျဆုံးထိဖိနှိပျပွီးရိုကျမှ စာတဈလုံးပျေါပါမယျ။ mechanical keyboard တှကေတြော့ key cap ရဲ့အောကျလေးမှာတငျ physical switch လေးနဲ့တှဲကပျထားတဲ့အတှကျ အောကျဆုံးထိဖိနှိပျစရာမလိုပါဘူး။
စာရိုကျရတာပိုလညျးမွနျဆနျသလို တိလညျးတိကတြဲ့အတှကျ feedback လညျးကောငျးနပေါတယျ။ switch တှလေညျးအမြားကွီးရှိတာကွောငျ့ ကိုယျရိုကျနကေကြိုယျသဘောကတြဲ့ switch မြိုးကိုရှာဝယျလို့လညျးရပါတယျ။ နောကျတဈခုက mechanical keyboard တှကေ ပုံမှနျကီးဘုတျတှထေကျ ပိုရှညျပါတယျ။
Yuemi MK01B မှာ key 87 ခုရှိပွီး ဒီဇိုငျးကိုကွညျ့ရတာကိုက တရုတျထုတျနဲ့မတူဘဲ Apple ရဲ့ထုတျကုနျလို့တောငျ ထငျရလောကျအောငျ မိုကျနပေါတယျ။ Cherry MX Red switch တှနေဲ့ ကီးဘုတျကို အဖွူရောငျဗားရှငျးအနနေဲ့ထုတျလိုကျပွီး iMac တှေ MacBook တှနေဲ့လညျး သုံးလို့ရပါတယျ။
သိပျသညျးတဲ့ဒီဇိုငျးနဲ့ တညျဆောကျမှုအရညျအသှေးကောငျးတာအပွငျ matte black အရောငျနဲ့ အနီရောငျ LED မီးတှကေ ဂိမျးသမားတှအေတှကျစှဲမကျစရာပါ။ key တဈခုစီရဲ့ switch တိုငျးရဲ့အပျေါမှာ အနီရောငျ LED မီးပါပွီးတော့ ညာဘကျအောကျထောငျ့မှာပါတဲ့ Fn key ကနေ LED မီးတှရေဲ့အရောငျကိုညှိလို့ရပါတယျ။
Windows button, Caps Lock နဲ့ Scroll Lock ဆိုတဲ့ Key သုံးခုမှာ အပွာရောငျ LED ပါပါပွီးတော့ အဲဒီ key တှပှေငျ့နတေဲ့အခြိနျ enable ဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာအပွာရောငျမီးပွနပေေးမှာပါ။ အဖွူရောငျဗားရှငျးမှာတော့ ကီးတှအေကုနျလုံးရဲ့အရောငျက အဖွူရောငျဖွဈနပွေီးတော့ ဒီ ကီး၃ခုက အနီရောငျ LED ကိုပွပေးထားမှာပါ။
ဘေးဘကျမှာလညျးဘောငျတှသေိပျမရှိတဲ့အတှကျ သယျရလညျးလှယျကူပါတယျ။ dimension ကတော့ 35.80 × 12.80× 3.16 cm ပါ။ ကြောဘကျကတော့ အကွမျးခံနိုငျတဲ့ အလူမီနီယမျပွားကိုသုံးထားတာကွောငျ့ အလေးခြိနျက ၉၄၀ ဂရမျရှိသှားပါတယျ။ ကြောဘကျမှာ ရာဘာအခံထောကျကလေးတှရှေိပွီး 4cm လောကျမွငျ့ပါတယျ။
ကွိုးနဲ့ကီးဘုတျဖွဈပွီး ထိပျဘယျဘကျထောငျ့မှာ microUSB ကွိုးလေးပါပါတယျ။ ဘာ driver မှမလို ဘာမှ install လုပျစရာမလိုဘဲ ကွိုးလေးကိုကှနျပြူတာရဲ့USB ပေါကျမှာတပျသုံးလိုကျရငျရပါပွီ။ ဈေးနှုနျးကတော့ $100 လောကျဖွဈလို့ ဈေးသငျ့တဲ့ကီးဘုတျထဲမှာတော့ မပါပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ တညျဆောကျမှုအရညျအသှေးပိုငျးရော red LED တှနေဲ့ MX Blue switch တှအေားလုံးကိုပေါငျးလိုကျရငျတော့ တျောတျောတနျတဲ့ကီးဘုတျထဲမှာပါပါတယျ။
ဗြိတိန်ရဲများက ဒရုန်းကိုသုံးပြီး ကားတိုက်မှုကနေလူတစ်ယောက်ကိုကယ်တင်ခဲ့